Tsamba yakagovaniswa naNigel C Williamson (@therealnigelcw)
Kana achisiyanisa gwenya senga pamwe njanji, mari yekunze, ruzha, kusvibiswa kwemhepo, tsaona, uye kwezvivako kudzikira, uye kuzara vari kure kudzika pasi nezvitima pane kushandisa motokari muchihwande.
Ruzha kusvibiswa ndiko kukanganisa mheremhere kune vese vanhu uye mhuka. Zviri zvakonzerwa murombo Urban Design. Matambudziko kubva ruzha kusvibiswa musi shure kuRoma yekare! nhasi, ruzha kusvibiswa kubva motokari kunogona kukuvadza vanhu vaMwari mupfungwa mamiriro. Zviratidzo zvinosanganisira BP, soro-kushushikana mumatunhu, tinnitus, hope chainetsa, uye zvimwe zvinokonzerwa.
Pane musiyano pakati Diesel nezvitima zvemagetsi nezvitima. Electric nezvitima emit 20-35% kabhoni shoma pane zvitima zvediesel. A chitima iri zvakatipoteredza ushamwari kunyanya Electric nezvitima kuti dzinofambiswa ne renewable simba uye ubayire kabhoni-vakasununguka nzendo. choutsi kubva nezvitima mu Europe kuchaderedza pedyo mberi 50% kubudikidza 2030. Izvi nhamba yakakura kubva nezvitima pamusana 8.5% zvose kufamba kwebasa.
Iyo posvo yakagovaniswa naDave Wheeler (@davewheelerstudio)
Chinhu chakakosha chinhu kana kuenzanisa nezvitima kuti ndege ndiko kuti ndege vanofanira kushandisa incredible yakawanda huni zvose yasimuka uye kumhara. wo, kana vanhu kufamba nendege, avanotarisira kusvika yendege nemotokari. Izvi zvinowedzera CO2 choutsi cherwendo. Izvi zvinoita kutora chinhu intercity chitima munhu asina-brainer zvakatipoteredza.
Pane zvimwe zvichangobva kuitika, kunyanya vanhu parwendo zvebhizimisi uyo anoudzwa nemutariri pakufamba vaishandira kabhoni kwechirwere ndege dzavo. wo, tisingabatanidzi zvakatipoteredza, zvakaoma kwazvo kusvika kumaguta nemotokari, nepo, kana uri muchitima, une zvakananga kuwana yemo nzvimbo. ichi, kakawanda, kunorevawo kuti zvikuru nokukurumidza kufamba nechitima pane dzimwe nzira ipi.
In mhedziso, chitima chiri zvakatipoteredza ushamwari uye zvikuru zvakatipoteredza-ushamwari nzira kufamba uye rinopawo zvivanakire vanhu vaifamba zvose bhizimisi uye mafaro. Kuwedzera motokari mumugwagwa zvinoreva kuti kuzara uye kusvibiswa kwemhepo dziri kuwedzera uye nezvitima ndiwo chokufambisa mhinduro kudzivirira zvakatipoteredza.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-choosing-to-travel-by-train-is-environmentally-friendly%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)